News - Ministry of Education | Page 3
Date :4October, 2020
October 4, 2020 - 8:05 pm | News
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ၁၇ ကြိမ်မြောက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးများ၏ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၄ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက အွန်လိုင်းမှ ကျင်းပ သော ၁၇ ကြိမ်မြောက် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးများ၏
Date : 1 October, 2020
October 1, 2020 - 8:03 pm | News
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner နှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး ဆွေးနွေး
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၁ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းဝေး ကို Video confercing ဖြင့်တက်ရောက်ပြောကြားစဉ်
September 29, 2020 - 8:55 pm | News
Comments Off on ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းဝေး ကို Video confercing ဖြင့်တက်ရောက်ပြောကြားစဉ်
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၉ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းဝေး ကို Video Conferencing ဖြင့်တက်ရောက်ပြောကြားပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ပညာရေး၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Education and TVET Sector Coordination Group – ETVSCG) ၏ အွန်လိုင်းမှကျင်းပသော (၁၅) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
Date : 24 September, 2020
September 24, 2020 - 8:38 pm | News
Comments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ပညာရေး၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Education and TVET Sector Coordination Group – ETVSCG) ၏ အွန်လိုင်းမှကျင်းပသော (၁၅) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၄ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် အွန်လိုင်းမှကျင်းပ သော ပညာရေး၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကဏ္ဍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့
September 23, 2020 - 8:16 pm | News
Comments Off on အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၃ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဖွဲ့လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၁၃) အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်။
Total Hits : 1142113828